AMAKHITSHI ANGAMA-30 EVULEKILEYO EKHITSHINI (IMIFANEKISO YOYILO KUNYE NOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi AmaKhitshi angama-30 evulekileyo ekhitshini (Imifanekiso yoyilo kunye noyilo)
Wamkelekile kwigalari yethu yoyilo ekhitshini evulekileyo. Ikhitshi lesitayile esivulekileyo lilungele abo banqwenela indawo yokuhlala enamanzi phakathi kwekhitshi kunye negumbi lokuhlala okanye indawo zokutyela. Uyilo lwekhitshi oluvulekileyo oluhamba luphuma kumagumbi amaninzi anje ngendawo yokutyela ukuya kwigumbi lokuhlala kunokuba yinto efanelekileyo kwiintsapho okanye kwabo bathanda ukonwabisa.
Kwisithombe esingentla apha sisisitayile semveli esivulekile kakhulu kunye nohlaziyo lwangoku oludibanisa zombini izitayile zangoku kunye nezakudala. Iikhabhathi zesitayile sendabuko ekhitshini ekhanyayo ineekhabhathi eziphambili zekhitshi, ngelixa isiqithi esikhulu sekhitshi siqhelanisa nesibindi seblue cobalt. Zonke iikhawuntari zinee-slab zemarble zokuchukumisa okuhle, ngelixa iindonga zekhitshi zigutyungelwe ziithayile zendlela emarmore. Isilingi enemiqadi yeplanga evulekileyo nayo inomdla njengoko isebenzisa iphepha lodonga elinombala endaweni yokugqitywa kwepeyinti.
bangaphi abangenisa umtshato
Iingcamango zeKhishi eziVulekileyo
Vula ubeko lweKhitshi
Vula iKhitshi kwigumbi lokutyela
Vula iKhitshi kwigumbi lokuhlala
Abanini bamakhaya abaninzi kule mihla bajonge iikhitshi ezivulekileyo ezinokuzisa usapho lonke kunye kunye nokuvumela ukonwabisa kunye nencoko ngokulula. Enye yezinto ezintle malunga noyilo lwekhitshi oluvulekileyo kukuba neekhitshi ezincinci zinokuziva zinkulu ngoyilo oluvulekileyo.
Nazi ezinye zezona zibonelelo zibalaseleyo zokuyilwa kwekhitshi evulekileyo.
Isusa iindonga ezinokunciphisa ukukhanya kwendalo
Yenza inkohliso yendawo enkulu
Ukukhuthaza iincoko ngokwenza kube lula kubahlobo kunye nosapho ukuba bathethe nompheki
Izisa usapho kunye ukunceda ukulungiselela ukutya kunye nokunceda ukugcina abantwana abancinci ngaphakathi kwamehlo
Ivumela ukutya-ekutyeni kunye nendlela yokuphila eqhelekileyo
Umxube wemihla ngemihla kunye neklasikhi, eli khitshi liqinisekile ukuzisa obu buhle bakudala nakweyiphi na indawo yanamhlanje. Imithi ye-oki yomgangatho wobunjineli kunye neendonga ezipeyintiweyo ezimhlophe zibeke imeko ethambileyo yokungathathi hlangothi kuyo yonke indawo yangaphakathi, ngelixa iikhabhathi ezimhlophe ezisicaba zeekhitshi ngokuqinisekileyo ziyavela. Iikhabhathi eziphambili zisebenzisa ilitye lesepha elimnyama kunye neethayile ezimhlophe zendlela engaphantsi kwetheyitile yalo kunye nokubuyela umva ngokwahlukeneyo, ngelixa Isiqithi esikhulu sekhitshi usebenzisa ilitye lesepha elimhlophe endaweni yoko.
Yintoni ehambelana nokusebenza kwaye isebenza ngaxeshanye kukuba nekhitshi evulekileyo evumela ukufikelela kunye nokudibanisa indawo yonke ngokumangalisayo. Kukho iintlobo ngeentlobo zendlela ekhitshini evulekileyo enokuthi yamkelwe ngokufanelekileyo ukuze ihambelane nomnqweno wakho, ukugcina ukusebenza kukhambelana nobuhle obukhoyo bekhaya.
Iindonga ezivulekileyo zekhitshi zihlala zineekhabethe kwicala elinye zivumela ukujikeleza ngokulula kunye nendawo yokukhonza. Ukugcinwa kunye nokulungiswa kokutya kuyenzeka kwicala lodonga olunye olwenza umbono ocacileyo wendawo evulekileyo yekhitshi ngokubanzi. Ikhabhathi yodonga olunye kubandakanya nesinki yedilesi yobume obunxibelelene kakhulu kanxantathu womsebenzi ophakathi kwefriji, ivenkile kunye nesinki.
Isiqithi sasekhitshini kwelinye icala sisebenza njengendawo yokugcina, indawo yokulungiselela ukutya kunye nendawo yokutyela ngelixa kuncitshiswa ifanitshala, kodwa kusenziwa imbonakalo yokusebenzisana kuyo yonke ikhitshi elingaphakathi. Ukuba i-Kitchen Island ayibonakali njengesisombululo esifanelekileyo sendawo yakho, kuhlala kukho ukhetho lokwenza ikhitshi evulekileyo kunye netafile eyongezelelweyo okanye usingasiqithi osebenzela injongo.
yeminyaka esixhenxe isipho seminyaka sokukhumbula
Umbono wokuba nekhitshi evulekileyo sesinye isizathu sokuba iindwendwe ziziva zikhululekile zingashiyi abaphilayo okanye igumbi lokutyela. Oku kuluncedo ngakumbi kwabo bafuna ukugcina iso kubantwana abancinci, ukuchitha ixesha elininzi kunye namalungu osapho okanye ukonwabisa iindwendwe.
Ezinye iindawo ezivulekileyo zekhitshi zahlulwe kuthathelwa ingqalelo iindawo ezimanzi nezomileyo zekhitshi. Njengesisombululo sengxaki evelayo uninzi lwabanini makhaya bandise itafile kwigumbi lokuhlala okanye kwindawo yokutyela ethintela ingxaki. Itafilethi ezandisiweyo okanye iziqithi zasekhitshini zinokuguqulwa ngokulula zibe yindawo yebar encinci kunye nokongezwa kwezitulo zebar ezimbalwa ukulungiselela iimfuno zakho. Ukufaka ii-ledges ezivulekileyo endaweni yekhabhathi evaliweyo yindlela yanamhlanje uninzi lwabanini bamakhaya eyamkela ngayo.
Iikhitshi zomqondo ovulekileyo kunye nezinye iindawo zekhaya zinokuyilwa ukuba zidityaniswe ngokulula, xa ungathandabuzeki zahlula iindawo ngento enje ngesofa okanye ityali okanye ngokukhanyisa, ukubeka ikhandlela elikhulu okanye into esele ikhona ngaphakathi. njengodonga oluqhotyoshelweyo ziinketho ezikufutshane.
Ingqondo evulekileyo yobuhle bekhitshi ibaluleke kakhulu. Ukukhanya, iphalethi yemibala, ukutyibilika kweminye yemiba efuna ukujongiswa ngokuthambileyo. Eyona nto inomdla kakhulu kwiindawo ezivulekileyo ngumbono ongaphazanyiswa obonakalayo ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye. Oku kunceda ekugcineni ubuhle rhoqo kwikhaya lonke ngokudibanisa ikhitshi lokuvula elivulekileyo ngaphakathi kwindlu yonke. Ukujonga iimeko ezithile, uyilo kuluhlu lweekhitshi zesiqithi eziqukethe unxantathu womsebenzi wazo zombini iziqithi.
Nangona iindawo ezivulekileyo zekhitshi zingenabucala kwihlabathi lanamhlanje apho iindima zesini zingathathi hlangothi zifuna ikhitshi evulekileyo. Uyilo oluxhokonxa intsebenzo sisicwangciso esiliqili esiza kusetyenziswa kumakhaya anamhlanje. Ivumba lekhitshi elivulekileyo linokuba yingxaki yokwenyani. Ingxaki ingasombululwa ngokufaka isiqingatha sodonga ngesahlulelo seglasi ngaphezulu esisebenza njengekhitshi evulekileyo yonke ngaxeshanye.
Iikhikhini zomqondo ovulekileyo zinezinto ezilungileyo nezingalunganga. Umzekelo ukufumaneka kokufikeleleka kunye nokuhamba ziimpawu ezintle zokuba nendawo evulekileyo yendawo. Unxibelelwano olukhuthazayo kunye nembono eyandisiweyo yendlu iphela phantsi koncedo olusisiphumo seendonga ezincinci. Ukufumaneka kokugcina kunye nolawulo lwendawo kubaluleke kakhulu kulo naliphi na ikhaya. Ubuhle obuhamba kunye nokubonakala kwale mihla, okucekethekileyo zizinto ezinomdla ezongeza kuyilo lwendlu. Nangona ikhitshi evulekileyo yayilelwe ngendlela ethile engenabucala iingenelo ngokuqinisekileyo ziluncedo ekunikezeleni ngendlu ekhitshini evulekileyo.
Ikhitshi eliphefumlelweyo loshishino elinokudibanisa okugqwesileyo kwemibala emnyama kunye nokukhanya. Iindonga ze-Beige zibonelela ngemvelaphi entle yokungathathi hlangothi kwiikhabhathi zekhitshi ezinamabala. Oku kubhangqiwe ngee-countertops ze-turquoise zalowo pop onesibindi kunye nentsimbi engenasici yokugqiba ikhitshi. Umdibaniso wahlukile kwaye ngokuqinisekileyo uvelisa isitayile sombane esityebileyo.
Ikhitshi evulekileyo yenguqu, ngeli xesha usebenzisa iikhabhathi zepeyinti ezenziwe ngepeyinti yokudibanisa iindonga ezilubhelu / ezimthubi. Le mibala, kunye nomgangatho womthi womthi kunye neethayile ezikhanyayo zetyheli engaphantsi kweglasi zenza umbala ococekileyo kwaye uthambile, ukwenza imbonakalo yabasetyhini kunye nenhle.
Le khitshi yoyilo ivulekileyo inesicwangciso somgangatho esibandakanya indawo yokuhlala echongiweyo ekwabelana ngendawo nendawo yokuhlala. Umgangatho wokhuni oluqinileyo uqhutywa kwindawo yonke kunye nophahla lweplanga elineemitha ezibonakalisiweyo.
Elinye ixesha langoku lithatha ikhitshi yesitayile yakudala, kusetyenziswa iikhabhathi ezilula ezifakwe ipaneli ngokudibanisa okumhlophe nokungwevu, okwenza indawo engapheliyo, engathathi cala ngokwesini. Uyilo oluvulekileyo luyidibanisa ngokuthe ngqo kwindawo yokutyela kunye nendawo yokuhlala, kodwa ngenxa yokhetho olugqwesileyo lokugqiba ikhitshi, inokulinganisa ngokulula nasiphi na isitayile esichaphazeleka kwezinye iindawo zendlu.
Le ndawo i-neo-classic enesitayile sendawo yekhitshi iyahambelana namanye amaqhekeza wefenitshala yasekhaya ekhayeni. Ubeko lwale khitshi luvulekileyo lwahlukile, apho kuhlala iindonga ezi-2 ezifanayo kwiikhabhathi eziphambili, ngelixa indawo yokutyela ibekwe kanye phakathi kweekhabhathi zombini, kuba kukho indawo enkulu yomgangatho ekhoyo. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zisebenzisa ukugqitywa kwepeyinti yekrimu kunye nomphezulu wemarble, ngelixa iziqithi zasekhitshini zigqiba ukumnyama ngokugqibezela okuphezulu kwemarble.
Iikhitshi zomqondo ovulekileyo zifunwa kakhulu emva kwabo bonwabela ukonwabisa kunye nentsapho eqhelekileyo. Ngaphakathi kwesi sithuba sekhitshi senziwe ikakhulu ngebala elimhlophe laseCalacatta laseColorado, lisenza ukuba sikhangeleke sihlambulukile kwaye sicocekile. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa umbala ofanayo omcaba kunye nokulinganisa iitayile ezimhlophe zangaphantsi zangasemva ukuze zilingane nembonakalo yangaphakathi. Ukongeza kancinane ngakumbi umahluko kunye nokuthelekisa, isiqithi sasekhitshini sisebenzisa ukugqitywa kweMahogany, siyenza ibonakale kwezinye iindawo ezimhlophe, kodwa ngaphandle kokuxhasa ezinye izinto zekhitshi. Indawo enkulu yokutya isidlo sakusasa yindawo ekumemela kuyo umntu ukuba atye okanye ancede ekulungiseleleni ukutya, ngelixa ibhentshi eliqaqambileyo lesitulo yenye into encinci eyongeza ubuntu kunye nomtsalane kwigumbi.
Le khitshi yesitayile inendawo ecwangcisiweyo, inendawo entle yokutya kunye neendawo zokuhlala njengoko ibekwe kwikona. Oku kukuvumela ukuba usebenze ekhitshini kwaye kwangaxeshanye, ulungiselele / wonwabise iindwendwe nokuba bakwisidlo okanye kwigumbi lokuhlala, okanye bobabini. Kuba i-architecture inesibheno se-rustic yelizwe, ikhitshi nayo iyalandela, ihlengahlengisa ukugqitywa kwepeyinti ye beige kwiikhabhathi ezisisiseko kunye neplabha eqinileyo yomthi kunye negranite ephezulu kwesiqithi sembombo.
Indawo yangaphakathi yesiFrentshi yangaphakathi enolwakhiwo oluhle oluvulekileyo luhlengahlengisa isikimu esimhlophe sonke ekhitshini laso elivulekileyo. Iinkcukacha zephaneli yangoku kunye neenkcukacha zokujika umlenze zisetyenziswa kwiikhabhathi zasekhitshini nakwisiqithi, zisinika ilizwe laseFrance eliqinisekileyo. I-nook yesidlo sakusasa emnandi enemiqamelo enemibala ingene kwikona yegumbi elinika indawo yokuhlala, yokutya kunye neyokuhlala.
ipatiyo yamatye ephakanyisiweyo
Uhlobo lwenguqu ekhitshini evulekileyo enefuthe loyilo loyilo oluhlengahlengisa indibaniselwano ye-wengue kunye nokugqiba okumhlophe kwiikhabhathi zayo zasekhitshini. Iikhabhathi eziphambili zisebenzisa ukugqitywa kwe-wengue nge-beige granite top, ngelixa i-2-level yenqanaba lekhitshi lisebenzisa isiseko esimhlophe kunye ne-beige granite ephezulu efanayo. Ukudityaniswa kokugqitywa kunika le khitshi lincinci uhlaziyo lwala maxesha, kunye nokusetyenziswa kwesitulo sebar yentsimbi kunye nezibane zezibane zangoku.
Olunye uhlobo lwesiko Uyilo lweziqithi zasekhitshini njengalo mzekelo, unokuba kwicala elinzima, usebenzisa izinto ezinkulu nezomeleleyo kunye neenkcukacha. Uyilo oluvulekileyo lweli khitshi linceda ithoni phantsi koku kujongeka kunzima, ke ngaphandle kokusetyenziswa kweebhloko ezinkulu kunye namatye abhalwe ngamatye kunye neekhabhathi zomthi zom-oki ezimnyama kunye nefenitshala, iyakwazi ukubonakala ikhanya kwaye ikhanya.
Ikhekhe lomtshato elikhethekileyo labakhwetha kunye nomyeni
Le khitshi yesitayile yenguqu yanamhlanje isebenzisa iikhabhathi zasekhitshini eziqinileyo zekrisimesi kwaye ziyayidibanisa neekhawuntari zegranite ezingwevu zangoku, ukujonga okunomdla ngakumbi. Eli khitshi lidityaniswe ngqo kwindawo yokutyela, kwaye ineefestile ezinkulu, ezivumela ukukhanya kwendalo okuninzi kwisithuba.
Izicwangciso zomgangatho ovulekileyo zihlala zisetyenziswa ezindlwini ezineendawo ezinomda ezinje ngale. Uyayibona indlela eyahlula ngayo ngokufanelekileyo indawo encinci phakathi kwekhitshi, indawo yokutyela kunye neendawo zokuhlala, ngaphandle kokuncama intuthuzelo kunye nokuhamba ngokulula. Olu luyilo lukwabonisa umahluko ogqwesileyo, kusetyenziswa ibhalansi elungileyo yokukhanya kunye nemibala emnyama, enje ngeekhabhi ezimnyama zekhitshi ezimdaka kunye nesiqithi esimhlophe sekhitshi kunye neenkuni eziqinileyo zokugqiba izitulo zebar.
Uyilo loyilo nekhitshi kunye nendawo yokuhlala kwigumbi elinye sele zithandwa kakhulu kwabo bathanda ukonwabisa, ukuchitha ixesha elininzi nosapho, okanye ukugcina nje iso kubantwana abancinci. Ikhitshi evulekileyo lilungile kumntu ongafuniyo ukupheka yedwa okanye azive ekhululekile ngexesha lokulungiselela ukutya. Ukufumana ezinye izimvo ngakumbi ndwendwela iphepha lethu ukubonisa uyilo oluvulekileyo lwekhitshi kunye negumbi lokuhlala Apha.
Elinye igumbi lekhitshi langoku elilungisa ubume obuvulekileyo, lenza ukuba libukeke libanzi kwaye linomoya. Iikhabhathi zasekhitshini zonke ziyahambelana, zisebenzisa umthi we-teak oqinileyo kwiikhabhathi kunye negranite emnyama ye-counter top kunye ne-backsplash. Izitulo zebar ezisetyenzisiweyo zikwangqinelana nesikimu sombala wekhitshi ngokubanzi, kusetyenziswa isinyithi esimnyama esinezihlalo eziphakanyisiweyo.
Ukusetyenziswa kwamatye e-cladding kunye ne-silhouettes yeklasi inika ngokwenene le khitshi ukuba yinyani ye-classic vibe. Oku uyilo lwekhitshi lobunewunewu ivulekile kuphela, inofikelelo ngqo lokutya kunye nendawo yokuhlala ngendlela enkulu. Ikhitshi ngokwalo lenziwe ziikhawuntari ezi-3 ezifanayo, izixhobo zokubala zodonga ezi-2 ezigqityiweyo zothuthu kunye nesiqithi esinye sekhitshi kwisiphelo esimhlophe esimdala. Iikhawuntari eziphambili zazine-slab eshinyeneyo ye-quartz emhlophe, ngelixa isiqithi sekhitshi, sisebenzisa i-quartz ye-beige.
Ikhitshi elihle elivulekileyo elidibanisa ngokuthe ngqo ikhitshi kwiindawo zokuhlala nezokutya. Ikhitshi kukuthatha okwangoku kwiiklasikhi zekhabhinethi zasekhitshini, kusetyenziswa isitayile sendabuko ngokugqitywa kwale mihla. Iikhabhathi eziphambili zapeyintwa ngombala omhlophe zaza zafakwa imabhile enophahla olucocekileyo kwiprofayili yanamhlanje, kwaye isiqithi esikhulu sase khitshini siya kugqiba ngomthi we teak oqinileyo ngemarble ukuze sichasane neekhabhathi ezimhlophe eziphambili. Ngasekunene kwayo kukho izibane ezi-3 zesinyithi zentsimbi, kwaye kwizitulo zebarstol, i-camelback ephakanyisiweyo ibisihlalo wokukhetha.
Eli khitshi livulekileyo lahlukile njengoko likwazi ukuzicombulula ngokuphuma kuyo yonke indlu, ngaphandle kokubhenela kwizahlulelo kunye neendonga, kuyila indawo enkulu evulekileyo. Ekuphela kwento eyahlula ikhitshi kuyo yonke indlu likhitshi lekhitshi / ibar yesiqithi. Uhlobo olusisilumko, lusebenzisa iikhabhathi zakudala ezigqityiweyo zelnut nge-beige sandstone counter top ecoliweyo ukuya kwimfezeko.
Enye ikhitshi yesitayile yenguqu ehlengahlengisa ubume obuvulekileyo bokunceda ukuba ijongeke ibanzi ngakumbi kwaye inomdla. Iikhabhathi zekhitshi zihlengahlengisa ukuthatha okwangoku iikhabhathi ezihonjisiweyo, ezifakwe igreyite emnyama engwevu, zenza indibaniselwano yeklasikhi kodwa esebenzayo yokugqibezela. Oku kukwahambelana neskim semibala engwevu namhlophe yendlu.
Ayisiyiyo kuphela lendlu enophahla oluphezulu, ikwahlengahlengisa uyilo oluvulekileyo, idala indawo yangaphakathi enomoya kwaye ivulekile, ifanelekile kwabo bathanda iindawo ezivulekileyo. Isithuba ngokwaso sesi uyilo lwesiko lekhitshi , ngokudityaniswa kweekhabhathi ezimhlophe kunye ne-countertop engwevu kunye nokubuyela umva kwelitye kwiikhabhathi eziphambili kunye nokugqitywa okumnyama kwe-mahogany yesiqithi kunye nendawo yetafile yesidlo sakusasa.
Eli khitshi liphefumlelweyo ilizwe lihlengahlengisa ubume obuvulekileyo. Yahlulwe kwindawo yokuhlala ngendlela enkulu enkulu, yenza umbono ongaphazanyiswanga kunye nendlela eya nasekhitshini. Iikhabhathi ezisetyenzisiweyo yigolide ye-teak, enezinto zokubala ze-beige ze-beige.
Njengokuba esi sithuba sele sineendonga zegolide ezityheli ezityheli, iikhabhathi zekhitshi ziya kwimo engathathi cala kunye neetoni ezantsi, zisebenzisa iikhabhathi zepaneli zangoku ezimhlophe ezifakwe izinto zokubala zegranite emdaka. Iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe zinceda ukulinganisela ukungcola kweendonga kunye neorenji ezifihlakeleyo zemigangatho, kodwa kwangaxeshanye, ayimi ngokupheleleyo njengoko imiphezulu yeetafile zayo zisadibana kunye namthubi kunye neeorenji zezinto ezingaphakathi ezigqityiweyo .
Umgangatho omdaka, omnyama walnut kwesi sithuba usete imvelaphi ecekeceke nenhle ngokugqibeleleyo kule khitshi yesitayile setshintsho. Imigangatho emnyama ivumela zonke iikhabhathi ezimhlophe zamakhitshi ukuba ziphume, zenze indawo ekhanyayo eqaqambileyo ngokudibanisa iikhabhathi ezimhlophe, izixhobo zokubala ezimhlophe zentsimbi kunye neethayile ezimhlophe zokubuyela umva.
Le yenye ye-white-white, i-neo-classic yoyilo lwekhitshi ephefumlelweyo enobeko oluvulekileyo, okwenza ukubonakala okuqaqambileyo nokubanzi. Zonke iikhabhathi zisebenzisa ukugqibezela okumhlophe ngeplabhathi yemarble ekugqibezeleni okuhle, ngelixa ukukhanya okukhanyayo kwemabhile emarmore kunika umbala ofudumeleyo obonisa ikhitshi, ukuthambisa ukugqiba okumhlophe okumhlophe kube mhlophe, kushushu okumhlophe. Amakhitshi evulekileyo evulekileyo kwigumbi lokutyela elifana nomfanekiso oboniswe apha kunokuba yinto elungileyo ukonwabisa. Imigangatho yeplanga emnyama emnyama iseti ngokwenyani kunye nesiseko esihle esenza le khitshi imhlophe iphume. Indawo inendawo evulekileyo enophahla oluphezulu, eyenza indawo eqaqambileyo nenomoya. Isitayela sendabuko ikhitshi elimhlophe kunye ne-marble countertop bubuhle beklasikhi, okwenza ukuba kubonakale kugqibelele nayiphi na enye ifenitshala yeefenitshala ozibeka kuyo.
Umxholo ovulekileyo iikhitshi ezineziqithi Ukuxhotyiswa ngemivalo enkulu yesidlo sakusasa kulungele iintsapho ezihambayo, kunye nabo bakonwabelayo ukuba yinxalenye yencoko ngelixa besekhitshini. Eli khitshi lincinci lanamhlanje linobume obunamandla obahlulahlula indawo yekhitshi kwezinye iindawo zendlu, ngaphandle kokuyifaka mnyama / ukuyicoca. Indawo yokubala isebenza njengesahluli phakathi kwekhitshi nendawo yokuhlala, ukubonelela ngokwahlulahlula okuphantsi nokungathinteliyo phakathi kwezi ndawo zimbini.
Ukulula kunye nokuqaqamba ngokuqinisekileyo kuphakamile ngale khitshi yesiko evulekileyo. Iikhabhathi ezigqityiweyo zonke zigqityiwe ngombala omhlophe ngombala ococekileyo nolula, umhlophe umphezulu wekhawuntari yindibaniselwano yeklasikhi emhlophe yemabhile kunye neethayile ezimhlophe zangaphantsi. Inkangeleko engapheliyo yale khitshi inokuhambelana nayo nayiphi na indlela yoyilo, nokuba yeyangoku okanye inkangeleko yemveli, isenza ukhetho oluhle kakhulu ekhitshini lakho.
Uyenza njani isaphetha inyathelo ngenyathelo
Le khitshi evulekileyo yanamhlanje ikhangeleka kunye nekhabhathi enkulu ebonakalayo ngokuchasene ne-beige granite countertops kunye ne-tile flooring. Indawo yotshintsho ivula ukuya kwindawo enkulu yokutya enendawo eninzi yokukhanya kwendalo kuluhlu lweefestile. Isiphatho esithandekayo sizisa ukubanjwa kwemveli kule ndawo yanamhlanje. Isiqithi esikhulu esinezitulo zebar ye-chrome sinika elinye ithuba lokutya-kwindawo yokutya okanye yokonwabisa.
Uyilo oluvulekileyo lwale khitshi luyanceda ukuba lubonakale lubanzi. Ngenxa yoyilo oluvulekileyo, uyilo luzimisele ukuhlala lulungelelaniswe kakuhle nalo lonke isithuba, kusetyenziswa iingine ezimnyama ezigqityiweyo iikhabhathi ukuze zifanise nezinye izinto ezigqityiweyo zomthi kwezinye iinxalenye zendlu. Ukukunceda ukuyiphosa ezantsi, kwasetyenziswa iitopu ezimhlophe zokubala, kunye neendlela zemarble ezisemva komgaqo weetayile. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu Izimvo zesiqithi sekhitshi .
Ukuthuka kwangaphakathi kwangoku
Usisi womtshato isipho somtshato
Izimvo zebhedi ebhedi
isinxibo somtshato sondwendwe
Izipho zesikhumbuzo seminyaka eli-14 kuye